MASHA ALLAH: Isagoo Sooman Ayuu Ciyaarayay, Xataa Ma Furin Ilaa Intii Ay Dhamaanaysay Ciyaartu - Laacib
HomeWararka Champions LeagueMASHA ALLAH: Isagoo Sooman Ayuu Ciyaarayay, Xataa Ma Furin Ilaa Intii Ay Dhamaanaysay Ciyaartu
MASHA ALLAH: Isagoo Sooman Ayuu Ciyaarayay, Xataa Ma Furin Ilaa Intii Ay Dhamaanaysay Ciyaartu
April 30, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Kulankii Manchester United ay xalay ku burburisay Roma, waxa uu ahaa bandhig cajiib ah laakiin xiddiga reer France ee Paul Pogba oo wacdaro dhigay ayay u ahayd habeen uu laba waajib gutay.
Pogba ayaa isagoo soomman ku bilowday ciyaarta, loomana joojinin waqtigii ay saacaddu gaadhay afurka, waxaanu dhamaystay iyadoo uu soomman yahay.
Laacibkan ayaa kooxdiisa ku keenay rikoodhe muran dhaliyey daqiiqaddii sagaalaad, kaddib markii ay kubaddu kaga dhacday gacanta, laakiin bandhiggii uu muujiyey qaybta dambe ayaa ahaa mid cajiib ah. Cavani iyo Fernandes ayaa min laba gool dhaliyey, Pogba iyo Fernandes ayaana ku daray labada gool ee kale, iyadoo United ku adkaatay 6-2.
Paul Pogba ayaa bandhiggan fiican sameeyey iyadoo aanu maalintii oo dhan waxba cunin, waxna cabbin, isla markaana xataa ciyaartu socotay iyadoo la gaadhay waqtigii uu afuri lahaa.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayuu si degdeg ah u galay qolka lebbiska oo uu afuray.
28 jirkan ayaan laga dareemaynin wax harraad, daal ama diciifnimo ah, waxaana mar uu dhowaan ka hadlay uu sheegay in aanay dhibaato ku ahayn in isagoo soomman uu tababarka qaato, ciyaarahana dheelo.
Waraysi uu toddobaadkii hore siiyey webstie-ka Manchester United, ayuu ku yidhi: “Muddo sannado ah ayaan soomayay. Waxa aan haystaa khabiir nafaqada ku takhasusay oo iga caawiya waxa aan cunayo iyo marka aan tababarka samaynayo, waxa uu isiiyaa xoogaa cunto ah, xoogaa barootiin ah, sidaa darteed waxba ma lumiyaan muruqyadaydu, waana caadi.
“Waan nasiib badanahay. Kulayl maaha (sannadkan), waanad ogtahay, sidaa darteed, waan la tacaali karayaa. Ma adka soonku, waad ogtahay. Waa wax caadi ah, waanu fiican yahay.”
Nabi maxamed صلى الله عليه وسلم wuu diiday in qofku iska sii af xidhnaado iyadoo la gaadhay wakhtigii afurka.
Afurku maaha in wax badan la cuno ama la cabo kaliya waxaa kaaga filan kabasho biyo ah taasna wuu samayn karayey pogba